गर्भावस्था - हरेक स्त्रीको जीवनमा सबैभन्दा मनमोहक विन्दु हो। आमा बन्न - यो राम्रो सुनिन्छ मात्र होइन, तर पनि प्राण को अभिव्यक्ति न्यानो हुन्छ संग: एक हृदय तपाईं आफ्नो बच्चा बोक्न। त्यो बस सिक्न धेरै रोचक छ। जब त्यो क्षण आउँछ। तपाईं गर्भावस्था बारेमा, वा परीक्षण खरीद द्वारा पत्ता वा स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक परीक्षा को लागि जान एकैचोटि भन्न व्यावहारिक। भविष्यसूचक सपना - तर भविष्यमा बच्चाहरु को जन्म तपाईं दर्शाउन हुनेछ अर्को विकल्प छैन। यो विधि महिला को आधा भन्दा बढी विश्वास गर्छन्। आखिर, सपना - यो जहाँ दक्ष व्याख्या धेरै रोचक कुराहरू सिक्न सक्छौं र प्रतिकूल कुराहरू हटाउन भविष्यमा, पुस्तकमा छ। मात्र सो को महत्व माथि र बिन्दु हामीलाई पठाइएका छन् कि संकेत मा ध्यान केन्द्रित गर्न मुख्य कुरा।
तसर्थ, हामी एक गर्भावस्था को सपना कि विचार गर्नुहोस्। सबै भन्दा साधारण निद्रामा - यो माछा छ। उदाहरणका लागि, तपाईं एक माछा मार्ने यात्रा मा हो र माछा, तपाईं बस दु: ख हुँदैन को फ्लोट समात्नुहोस्, तर तपाईं शिकार बाहिर निकाल्न छ। माछा बाहिर निकाल्न सक्षम हुनेछ भने, यो चाँडै नै आमा हुनेछ भन्ने हो। दोस्रो निद्रामा विकल्प "माछा खान्छन्।" हो उदाहरणका लागि, तपाईं एक प्रेम एक साथ एक आरामदायक क्याफे बसेर छन् र तपाईं माछा पकवान ल्याउन। तपाईं माछा भन्दा अन्य गर्भावस्था को के सपना गर्न अनुरोध? यो ताजा वा मसालेदार खीरे। यस मामला मा, सपनामा, तपाईं निश्चित तिनीहरूलाई खान गर्नुपर्छ। साथै, आज तपाईं गर्भावस्था को दूत बन्न सबै सपना सूची हुनेछ: एक कागति वा खरबुजा, चेरी को खरीद; एक गर्भावस्था परीक्षण को सपना भने - भविष्यमा आमाहरु को एक चिन्ह पनि हो; सपना कि जान चाहँदैनन् हात द्वारा राख्न र साना छोराछोरी छन्; के तपाईं सफा नदी देखे, र यो माछा swims मा सपना भने; मशरूम; घुमक्कड; सारस। र यो आफ्नो परिवार को पूरा चिनो भनेर सारा सूची छैन। तपाईं अझ बढी सिक्न र सपना decipher गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले हुनेछ पुस्तक के सपना सपना गर्भावस्था। कुनै पनि खोज इन्जिन मा, तपाईं पुस्तक एक गर्भावस्था को सपना एक शब्द वा प्रश्न ड्राइभ सपना र जवाफ प्राप्त। निस्सन्देह, सबै भन्दा राम्रो विकल्प - एक खोज इन्जिन आफ्नो निद्रामा प्रविष्ट गर्न छ, के ठीक के तपाईं सपना देख्यो र के भन्दा स्मरणीय थियो।
धेरै आमाहरु मुख्य कुरा हो, यो पनि सपना मा एक विश्वास छ भन्छन्। यदि तपाईं माछा को सपना देख्यो, तब तपाईं मेरो विचार सङ्कलन र आफूलाई सकारात्मक गर्न attune गर्न आवश्यक छ। निद्रामा खराब सपना पनि भने, तर तपाईंले पहिले नै तपाईं कुनै एक कुरा संग सुतिरहेको पछि गर्भवती छन् भनेर थाह, विन्डो गर्न, "जहाँ रात त्यहाँ सो।" आउन र भन्न सडक मा बाहिर हेर्न, सायद खराब सपना - यो संचित नकारात्मक भावना को बस एक ढेर, यो भूल राम्रो छ त, आफैलाई धोखा होइन हो।
गर्भावस्था लागि सबै सपना - यो केवल छ। यसरी, सुत्न वाहेक मा ट्युन गर्न मद्दत गर्छ र आफ्नो सबै दृश्य संशोधन। ब्रिटिश वैज्ञानिकहरू साक्षात्कार, एक प्रयोग सञ्चालन गर्भवती महिला आफ्नो निद्रामा बारेमा। अन्तमा, यो एकदम रोचक थियो: महिला वाहेक सुझावको साथ सपना थियो जो 80%, होइन बच्चालाई जन्म लागि मनोवैज्ञानिक तयार थिए। यो प्रश्न उठ्छ: "? महिलाहरु को लागि एक निश्चित जरूरी को सपना आमा को भूमिका भिज्न यदि गर्दैन" शायद यो जो तपाईं आफ्नो सबै समस्या बारे भूल गर्न अनुमति दिन्छ मनोवैज्ञानिक पाठ केही दयालु, छ, र तपाईं आमा बन्न, त्यसैले ध्यान दिएर दृष्टिकोण चाँडै तपाईं स्मरण गराउन यो मुद्दा गर्न। यसलाई असामान्य सपना को सपना जो हरेक महिला decipher रूपमा चाँडै सकेसम्म प्रयास गरिएको छ, र उचित यति भन्न सुरक्षित छ। गर्भवती आमाहरु को सारा जीवन ती सपना मध्ये वर्णन गर्न सकिँदैन। गुप्त सपना यसलाई अलिकति अप्रिय छ पनि भने, सम्भव सधैं छ, तर, तैपनि, हामीले यो तपाईंको भावी जीवनको एउटा सम्भव संकेत हो भनेर बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले, तपाईं गर्भावस्था को सपना, सपना-पुस्तकहरू वेब पृष्ठहरू स्क्रोल कि जान्न चाहन्छु र यदि तपाईं तपाईंको जवाफ पाउन बाँधिएका छन्। बाट देख जो कोहीले कहिल्यै बुझ्छ।
ज्ञात दबाइ "Pimafutsin"। निर्देशन र आवेदन
कस्तो म्याराथन, इतिहास र तथ्य छ
Shurpa पाठो: केन्द्रीय एशियाली भोजन को पहिलो पकवान सन्तुष्ट
दबाइ "मैगनीशियम Diasporal": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, वर्णन